Abafundi abavela e-UKZN kanye nezinye izikhungo kwiNkuthazokusebenza ebisingathwe i-Municipal Institute of Learning.
Isikhungo sikaMasipala sezokuFunda esibizwa phecelezi – (MILE – Municipal Institute of Learning) ngobudlelwano obuqalisayo obubizwa nge-Making City-University Partnerships Happen-sisingathe inkuthazokusebenza yesine yemvelo yezokwakha nehlanganise ndawonye labo abamele izikhungo zemfundo okufaka phakathi ne-UKZN.
Lezi nkuthazokusebenza ezenziwa kane ngonyaka zihlinzeka ngenkundla kwizazimfundo ezimqondofana, abafundi, izikhulu zikahulumeni kanye nongoti kwezokwakha kanye nabanye abenza okufuze lokhu.
Inhloso-ngqangi yalokhu ukuthi kufundiswe ngokwakhayo izinkundla zezingxoxo-mpikiswano maqondana nezinselelo ezibhekene nezikhala zasemadolobheni. Kujwayelekile kwamukelekile ukuthi ezokwakha zikwazi ukwethula izinselelo ezinhlobonhlobo zasemadolobheni ezivela ngokuhlupheka kanye nokuswela izinziza kanye nezindawo zokuhlala eziphephile.
Izihambeli kwinkuthazokusebenza zezwa ukuthi ngaphandle kokuhlela okwanele nokuzinzile kwezokwakha, ubuphofu kanye nokufuduka kusazoqhubeka emadolobheni futhi kuqhubeke nokubukela phansi imizamo kuzwelonke kanye namazwe ngamazwe yokuthuthukiswa koluntu.
Izinkuthazokusebenza ziyindawo lapho kusungulwa khona izincomo okungazuzwa ngazo kulo mkhakha kudingeka ukuba kube nezindlela kanye nemizamo ehlangene kanye nemikhakha eminingi ukwenza lokhu.
Izinkuthazokusebenza ziba nezingqikithi ezihlukene emkhakheni wezokwakha okuhlanganisa ukuthuthukiswa kwenhlolonhle, ukuthuthukiswa kofuduko lwabantu kanye nokuhlelwa kwedolobha. Umnyango wezezindlu kanye nokuhlelwa e-UKZN uhlose ukuba uphons’esivivaneni solwazi kwizingxoxo-mpikiswano mayelana nofuduko lwabantu kanye nokudalula kubafundi asebeneziqu kulezi zingxoxo-mpikiswano, kubeka uSolwazi Thokozani Xaba oyiDini kanye neNhloko kwiSikole sezemvelo kwezokwakha kanye nokuthuthukiswa.